Indostrian'ny hotely Thailandy: mandeha ra hatramin'ny fahafatesany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Indostrian'ny hotely Thailandy: mandeha ra hatramin'ny fahafatesany
Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Seranam-piaramanidina Suvarnabhumi saika nilaozana tao Bangkok tamin'ity herinandro ity
Thailandy dia nitatitra 3,880 fotsiny Olona voan'ny covid-19 ary 60 ny maty hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra ary noheverina ho iray amin'ireo firenena atahorana indrindra eto an-tany. fa mijaly ny dia sy fizahan-tany. Tsy misy fiafarany ny fameperana ataon'ny governemanta hametra ny fivezivezena, ny orinasa lehibe sy ny lehibe dia mandehandeha ary miady mafy mba ho velona. Ireo mpandraharaha Hotely Thailand, hoy ny Nation, dia miangavy ny governemanta hanokatra indray ny firenena ary hanao hetsika tsy ho ela hanampiana ny orinasany, izay mihosin-dra mandra-pahafatiny, hoy izy ireo.
Suphajee Suthumpun, lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Dusit Thani, dia nilaza fa raha tsy hisokatra tsy ho ela ny firenena dia ho fatiantoka mavesatra ny mpandraharaha hôtely. Ary koa, hoy izy, ny banky sy ny andrim-panjakana dia tsy manome findramam-bola mora amin'ny orinasa fizahan-tany noho ny risika.
"Noho izany dia te hangataka amin'ny governemanta izahay hamoaka fepetra ara-bola hanohanana ireo orinasan'ny fizahantany ary hanome toromarika ny Thai Credit Guarantee Corporation hanome antoka ny indram-bola ho an'ny orinasa kely sy salantsalany," hoy izy.
“Tianay koa ny mangataka amin'ny banky foibe mba hanamora ny lalàna mifehy ny trosa satria ny trosa maro amin'ireo orinasa lehibe dia efa antomotra.”
Nanentana ny minisiteran'ny fizahantany sy ny fanatanjahantena ihany koa i Suphajee mba hametraka tahiry fanarenana fizahan-tany hahafahan'ireo mpandraharaha hôtely mindrana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny hotely ho antoka.
"Satria antenaina ho vonona amin'ny taona ho avy ny vaksinin'ny Covid-19, dia tokony hanana rafitra e-visa ny governemanta hanampiana ireo mpizahatany hiverina eto amin'ny firenena," hoy izy nanampy.
Chaiyapat Paitoon, talen'ny paikadin'ny tetikadin'ny Minor International, dia nilaza fa very mihoatra ny Bt14 miliara ny orinasa tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny taona, ary ny orinasany any Thailandy dia nahatratra Bt2 miliara ny fatiantoka.
Nilaza izy fa mety mila mampiroborobo ny vola mamatsy vola azy ny orinasa, amin'ny alàlan'ny fitadiavana renivohitra vaovao na fandefasana trosa arahin'antoka raha toa ka tsy manokatra ny firenena ato ho ato ny governemanta.
"Ny governemanta dia tokony hijery ny tetik'asa momba ny fitsangatsanganana, hanamorana ny fitsipiky ny fitokantanan-tena ary handefa fepetra hanohanana ireo mpandraharaha," hoy izy.
Marisa Sukosol Nunbhakdi, filoha lefitra mpanatanteraka ao Sukosol Hotels sady filohan'ny Fikambanan'ny Hotely Thai dia nilaza fa ny governemanta dia tokony hanao fepetra hanampiana ireo trano fandraisam-bahiny, toy ny fandoavana ny 50 isan-jaton'ny karaman'ny mpiasa hotely tahaka ny efa fanaony amin'ireo nahazo diplaoma vaovao.
"Ny governemanta dia tokony hanitatra ny anjara birikiny 2 isan-jato amin'ny Tahirim-piarovana ara-tsosialy, hametraka ny hetra amin'ny tany sy trano hatramin'ny 10 isan-jato ary hanamora ny fitsipiky ny fitokantanan-tena," hoy izy.
Raha misy fanalefahana ny fameperana ny dia, misy porofo matanjaka fa ho avy ny mpitsidika. Araka ny voalazan'i Barry Kenyon, ilay Consul Honorary britanika teo aloha izay hajaina tany Thailandy, dia nanoratra tao amin'ny Pattaya Mail tamin'ity herinandro ity fa hatramin'ny nanavao ny visa nandritra ny 60 andro (fidirana tokana) tao Thailandy tamin'ny faramparan'ny volana lasa teo, ireo masoivoho manerantany dia mitory fahalianana goavambe ataon'ireo vahiny maniry mafy ny hiala amin'ny ririnina mahery na handositra ny tanindrazany voan'ny coronavirus.
Parkpoom Prapasawudi, filoha lefitry ny fizarana Hotel Asset Management an'ny vondrona Erawan Group, dia nilanja ihany koa tamin'ny filazany fa ny tahan'ny hotely dia 20 isan-jato nandritra ny dimy volana mahery noho ny fameperana ny dia.
"Hafa noho ny any Chine sy Eropa ny toe-draharaha any Thailand, izay 50 ka hatramin'ny 60 isan-jato ary 30 ka hatramin'ny 40 isan-jato ny isam-batan'olona", hoy izy, ary nilazany fa tsy maintsy sokafana ny firenena satria tsy afaka miaina ny hotely raha mbola ambany dia ambany ny fipetrahana.
"Raha tsy te-hanokatra ny firenena ny governemanta dia tokony hametraka fepetra hanohanana ny orinasan'ny hotely izany," hoy izy, ary nilaza fa tsy afaka namorona drafi-pandraharahana ireo mpandraharaha hotely satria tsy nanome torolàlana mazava ny governemanta. Tokony hanao fampielezan-kevitra ny governemanta hanentanana ny fanentanana ny besinimaro amin'ny fanokafana indray ny firenena, satria tsy afaka ho afaka amin'ny Covid-19 mandrakizay i Thailand.
"I Thailand sy ireo firenena tratry ny aretina azo antoka dia tokony hiasa amin'ny drafitra bubble fitsangatsanganana toa an'i Singapore sy Hong Kong satria ny mpandraharaha trano fandraisam-bahiny dia tsy mahazaka vola be na mampiditra vola bebe kokoa amin'ny orinasany," hoy izy.
Mandritra izany fotoana izany, ny minisitry ny fizahantany sy ny fanatanjahantena Pipat Ratchakitprakarn dia nilaza fa ny praiminisitra Prayut Chan-o-cha dia nanome baiko ny Ivotoerana fitantanana toe-karena ara-toekarena (CESA) hiasa amin'ny fametrahana tahiry famerenana fizahan-tany ho fanampiana ny sehatry ny fizahantany. Ity famatsiam-bola ity dia antenaina fa hijanona eo anelanelan'ny Bt50 miliara ka hatramin'ny Bt100 miliara.
"Hiresaka tolo-kevitra hafa amin'ny praiminisitra sy CESA ihany koa izahay, indrindra ny safidin'ny e-visa, mba hahafahan'ny mpizahatany miverina any Thailandy rehefa vonona ny vaksinin'ny Covid-19," hoy i Pipat.
Tsy ny hevitra rehetra avy amin'ny governemanta no mandeha. Ny Consul teo aloha Barry Kenyon dia nanoratra fa be ny fankalazana momba ny fanambarana ny Visa momba ny mpizahatany manokana (STV) tamin'ny volana lasa, izay manolotra fijanonana hatramin'ny 270 andro, na izany aza dia nanjary haingana fa io visa io dia tsy misy afa-tsy ho an'ireo avy any ambany- mety hampidi-doza ireo firenena Covid-19 izay nanilika ny UK, Etazonia ary Eropa afovoany amin'ireo faritra hafa.
Misy ihany anefa ny safidy visa hafa azo alaina, araka ny efa voalaza tetsy aloha, izay hamela ny fivezivezena nefa misy fehin-kiho be pitsiny hitsambikina. Nanoratra Andriamatoa Kenyon,
“Misy ny visa mandritra ny 60 andro, mbola betsaka ihany ny birao na dia eo aza ny fangatahana ny taratasy fanamarinana tena ilaina momba ny fidirana miampy ny fitsapana ara-pahasalamana Covid-19, fandoavana mialoha mandritra ny 14 andro ny quarantine tsy maintsy atao amin'ny hotely amin'ny fipetrahana ao Bangkok, Covid voafaritra. fiantohana ho 100,000 0 dolara amerikana (azo zahana an-tserasera mora ho an'ny olona 99-XNUMX taona izao) sy porofo hipetrahana any Thailandy ankoatry ny fe-potoam-paharetana ", hoy izy.